Ọrụ igwe ojii ọhụụ maka Injinstructure Engineering Digital Twins - Geofumadas
Twmụ ejima dijitalụ na-abanye na isi: ụlọ ọrụ injinia na ndị nwe ya. Tinye ebumnuche ejima dijitalụ
SINGAPORE - The Afọ na 2019 Ngwurugwu- October 24, 2019 - Bentley Systems, Incorporated, onye na-eweta ụwa niile nke ngwanrọ zuru oke na ọrụ igwe ojii nke ụmụ ejima dijitalụ, webatara ọrụ igwe ojii ọhụụ maka ụmụ ejima injinịa akụrụngwa. Twmụ ejima dijitalụ bụ ihe ngosi dijitalụ nke akụ anụ ahụ na ozi injinia ha, nke na-enye ndị ọrụ ohere ịghọta na gosipụta arụmọrụ ha na ụwa n'ezie n'oge ndụ ha niile. N'ezie, «evergreen» ejima dijitalụ na-eme ka BIM na GIS site na 4D.
Keith Bentley, onye nchoputa na onye isi ndi isi teknụzụ, kwuru, sị: "Taa," afọ nke ejima dijitalụ "na-aga n'ihu, yana ije ya na-agbatị kwa ụbọchị. Ndị ọrụ mbụ anyị so rụ ọrụ na-arụzi ọrụ n'ọnọdụ ọnọdụ akụ na ụba dijitalụ ọhụrụ, na-echepụta ihe ọhụrụ na usoro azụmaahịa ha na n'usoro azụmahịa ha. Uru ndị a na-enweta site na dochie afọ iri na ụma na ọrụ ndị a na-emechi emezi na akwụkwọ, na-ejikọ, ndụ, ntụkwasị obi na afọ ejima dijitalụ buru ibu. Ijikọta nke ahụ na usoro ihe eji emepụta ihe site na nyiwe mepere emepe na-emepụta ike a na-apụghị ịgbagha agbagha maka mgbanwe akụrụngwa. Anaghị m echeta oge kachasị ụtọ maka ọrụ akụrụngwa ma ọ bụ maka Bentley Systems. "
Ọrụ ọhụụ na igwe ojii Digital Twins
Ọrụ ITwin na-ekwe ka ụlọ ọrụ injinịa mepụta, jiri anya nke uche na nyochaa ihe ejima dijitalụ nke akụrụngwa na akụ. Ọrụ Serviceswinwin jikọtara ọdịnaya injinịa dijitalụ nke ihe eji emepụta BIM na ọtụtụ ebe data, na-enweta “4D visualization” nke dijitalụ dijitalụ, na ịdekọ mgbanwe injinịa na usoro / atụmatụ bara uru, iji nye ezigbo aha onye gbanwere ihe oge na. Ndị otu injinịa na-eji Ozizi Eluwin iji mee nyocha na nnabata nke data chepụtara ma mepụta ihe ọmụma / echiche atụmatụ. Ndị ọrụ Bentley imewe ngwa nwere ike itinye ọrụ mmụọ nke mmụọ nke mmụọ nkọwia maka nyocha nke ho hoc, na ndị otu oru ngo na-eji ProjectWise nwere ike ịgbakwunye ọrụ nke Mattwin Design Review na arụmọrụ dijitalụ ha iji mee ka ejima dijitalụ nke oru ngo n'ozuzu ya.
PlantSight bụ onyinye nke Bentley Systems na Siemens jikọtara ọnụ, nke na-enye ndị nwe ụlọ ọrụ na ndị injinia ha ikike ịmepụta, ụmụ ejima dijitalụ na-arụ ọrụ nke usoro. PlantSight na-akwado arụmọrụ, ndozi, na injinịa iji nweta data ejima a pụrụ ịdabere na ya na nke ziri ezi n'ụzọ miri emi, gụnyere P&ID, ụdị 3D, na data IoT.
Ọ na-enye ọhụụ pụrụ iche nke eziokwu n'ụdị ozi amamịghe, na-eme ka ọgụgụ isi ọnọdụ, usoro nke ịhụ ụzọ na ịmara ọnọdụ dị. PlantSight bụ Bentley na Siemens jikọtara ọrụ nke Mattwin iji rụọ ọrụ PlantSight ma ụlọ ọrụ ọ bụla dị na ya.
Elolọ ọrụ nke Mattwinwin na-enye ohere ka ndị na-ahụ maka ọrụ na-eji AssetWise hazie data arụmọrụ yana nyocha arụmọrụ dabere na ejima ha dijitalụ, na-eme ka ozi ndị injinịa nweta ọtụtụ ndị na-ege ntị na ọrụ site na ahụmịhe nke onye njikwa miri emi. Arụpụta ihe mkpuchi nke Mattwinwin gosipụtara “isi ihe dị mkpa” ọrụ yana mgbanwe ọnọdụ nke akụ ka oge na-aga, nke na-eduga n'ikpebi mkpebi ọsọ ọsọ ma mara nke ọma nke na - emesịa nyere aka melite arụmọrụ nke akụ na netwok.
Twmụ ejima dijitalụ na-abanye n'ọnọdụ ahụ
Eziokwu niile a na-ahụ maka ịdị adị nke uru dị na mbụ esiri ike ijide ọnụọgụ ma na-emelite. Na mgbakwunye, ozi injinịa kwekọrọ, n'ọtụtụ faịlụ faịlụ na-ekwekọghị na mgbanwe na-agbanwe agbanwe mgbe niile, abụrụla 'data gbara ọchịchịrị', nke bụ enweghị adị ma ọ bụ enweghị atụ. Site na ọrụ ejima igwe ojii dijitalụ, Bentley na-enyere ndị ọrụ aka imepụta ma họrọ ejima dijitalụ iji melite ọrụ na ndozi nke akụ anụ ahụ, usoro na usoro iwu ihe owuwu, site na ntinye anya na 4D na anya nyocha.
N’afọ 2019 Bentley na infrafra Conference, e gosipụtara ụzọ ejima dijitalụ n’ime ọrụ iri abụọ na anọ n’ahịa iri abụọ na ise, n’ebe dị iche iche n’obodo iri na anọ na-esite na njem, netwọ mmiri na osisi ịgwọ ọrịa, osisi ike. na ụlọ Na mkpokọta, ntuli aka 24 na mpaghara 15 kwuru ụmụ ejima dijitalụ dị ka ebumnuche maka mmegharị nke ejiri na oru ha, mmụba dị ukwuu nke 14 ahaziri ma e jiri ya tụnyere 139.
Echiche banyere Twins Digital na arụmọrụ
Na nkuzi teknụzụ, Keith Bentley sonyeere ogbo ahụ na ndị nnọchi anya Sweco na Hatch, na-egosi echiche nke ejima ihe eji eme ihe eji eme ihe dijitalụ.
Sweko Ejiri usoro nke ụzọ ụgbọ oloko nke-kilomita iteghete maka obodo Bergen na Norway. A na-ahazi ndọtị nke usoro dị ugbu a site na ụdị 3D BIM, site na ọmụmụ ndị ọzọ na usoro injinịa zuru ezu. Ojiji nke ọrụ Mattwin kwere ka Sweco soro mgbanwe ndị na-akpaghị aka ma belata njehie, na-ekwe ka anya nke 4D.
Onu dechara usoro, ike ga -ezi na injinịa zuru ezu maka nrụnye sọlfọ acid na Democratic Republic of Congo. Ngwa mgbakwunye ihe ọkụkụ nke Bentley kwere ka ndị ọrụ ngo a chepụta ejima dijitalụ zuru oke ma nwee ọgụgụ isi na ọkwa ogo ihe niile, na-ebugharị usoro ọrụ injinịa elu dịka akụkụ nke mbọ mmemme 3D, ma e jiri ya tụnyere usoro nke Ogo dabere na ihe osise ọdịnala. Hatch nweziri ike belata mmụba nke mmepụta mgbe mmalite ọnwa isii rue otu izu.
Microsoft Ọ na-ekepụta ụdị ejima dijitalụ n'isi ụlọ ọrụ Asia ya na Singapore na n'ogige ụlọ ọrụ Redmond ya. Otu Microsoft Real Estate na Security otu na-eme ihe a ga-eme maka ịbịakwute Digital Building Life Cycle iji bulie arụmọrụ ụlọ, uru, afọ ojuju onye ọrụ, nrụpụta na nchekwa. Mgbalị ndị Microsoft mepụtara iji gosipụta ihe ngosi dijitalụ nke anụ ahụ dịka ụlọ dị na Microsoft Azure Digital Twins, ọrụ IoT na-enyere ndị otu aka imepụta ụdị dijitalụ nke gburugburu anụ ahụ. A tọhapụrụ Azure Digital Twins na ọha na eze na 2018 ma ugbu a bụ ndị ahịa Microsoft na ndị mmekọ na-anabata ya ugbu a, gụnyere Bentley maka Ọrụ Nzuzo ya. Companieslọ ọrụ ndị ahụ na - arụkọ ọrụ ọnụ iji mepụta ejima dijitalụ nke ụlọ ọrụ Microsoft ọhụrụ na Singapore.
Dijitalụ ejima gburugburu
Ejikọtara ọrụ abụọ nke Mattwinwin na PlantSight na iModel.js maka mmalite ejima, nke ejikọtara ya na Ọktoba nke 2018 wee rute ụdị 1.0 ya na June nke 2019. Otu ihe kpatara eji mepee koodu iModel.js bu iwulite ihe omuma ohuru nke ndi ntuputa ihe omimi dijitalya, ndi nwe ha, ndi injinia na ndi dijital.
Otu n'ime mmepe mmepe komputa elektrọnik ahụ bụ vGIS Inc., nke jiri iModel.js iji tinye njikọta agakọ agwakọta (XR) n'ime ejikọ ihe eji eme njem dijitalụ. Ya agwakọta eziokwu mobile ngwa anya merges oru ngo imewe ụdị na eziokwu, n'ọhịa, na ozugbo. Ndị ọrụ n'ọhịa nwere ike ịhụ ọrụ nke ọdụ ụgbọ mmiri, dị ka ọkpọkọ na eriri, jikọtara na nghazi ụwa ha n'ezie. Ndị ọrụ na-ekwupụta ihe dị iche iche na ngwaọrụ mkpanaka ha iji hụ ihe ngosipụta nke oru ngo a n'ọnọdụ a.
Alec Pestov, onye nchoputa na onye isi vGIS, kwuru, sị: “Mlọ ọrụ iModel.js bụ nnukwu akụ maka ịzụlite na ijikọta ngwa ọrụ na ọrụ dị ka mgbakwunye dị elu na vGIS mepụtara n'ezie. Anyị hụrụ mmekorita nke zuru oke na ọrụ iTwin na ụzọ mmepe esemokwu na-enweghị nsogbu iji ruo na ntinye ahụ zuru oke, anyị na-atụkwa anya ịgbasa ikike mmekorita anyị, site na ọrụ eberewin.
Nkọwapụta nke Twins Digital
Twmụ ejima dijitalụ bụ ihe nnọchianya dijitalụ nke akụ na sistem anụ ahụ na gburugburu ebe ha, ebe ọmụma injinịa ha na-aga, iji ghọta ma gosipụta arụmọrụ ha. Dika ezigbo akụ nke ụwa ha na-anọchi anya ya, ejima dijitalụ na-agbanwe mgbe niile. A na-emelite ha site na ọtụtụ isi mmalite, gụnyere sensọ na drones, iji nọchite anya steeti n'oge kwesịrị ekwesị ma ọ bụ ọnọdụ ọrụ nke akụrụngwa akụrụngwa n'ezie. N'ezie, ejima dijitalụ, - site na ijikọta onodu dijitalụ na ihe dijitalụ ya na ihe omimi dijital, BIM na GIS na-aga n'ihu site na 4D.
Abamuru nke Twins Digital
Twmụ ejima dijitalụ na-enye ndị ọrụ aka ịlele atụmatụ ahụ dum, na ihe nchọgharị weebụ, mbadamba ụrọ ma ọ bụ na isi isi nke agwakọta; inwe ike ịchọpụta ọkwa ahụ, nyocha ma mepụta ozi iji buo ma kwalite ịrụ ọrụ bara uru. Ndị ọrụ nwere ike iru ogbe tupu ha arụ ụlọ, na-eme atụmatụ ma wepụ ihe mmezi tupu ha eburu ha n'ụwa n'ezie. Ugbu a, ha nwere software n'iji ha iji anya nke uche ahụ ọtụtụ narị ndapụta, na-erite uru nke mmụta igwe iji tụọ usoro ndị ọzọ ma ọ bụ atụmatụ mmezi ma bulie n'ofe oke. Nlele anya na ntughari nke inyocha injinia na-eduga n’ime mkpebi ime mkpebi dị mma na itinye aka na ndị na-ekere òkè na ndụ niile nke akụ.
Banyere Ọrụ Bentley iTwin
Ọrụ ITwin na-enye ohere ka ndị otu oru ngo na ndị na - arụ ọrụ aka mepụta, jiri anya ha hụ na 4D ma nyochaa ejima dijitalụ nke akụrụngwa akụrụngwa. Ọrụ ITwin na-ahapụ ndị nchịkwa ozi dijitalụ ịgụnye data injinịa mepụtara site na ngwa ọrụ dị iche iche n'ime ejima dijitalụ na-ebi ndụ ma mezie ha na ezigbo usoro na data ndị ọzọ metụtara, na-enweghị ịkwụsị ngwaọrụ ha ma ọ bụ usoro ha ugbu a. Ndị ọrụ nwere ike ịlele ma sochie mgbanwe injinịa n'akụkụ usoro iheomume a, na-enye ndekọ dị mma banyere onye gbanwere ihe na mgbe. Ọrụ ITwin na-enye ozi mmezi maka ndị metụtara mkpebi n'ime nzukọ niile yana usoro ndụ nke akụ. Ndị ọrụ na-eme mkpebi ndị amachaghị nke ọma, na-atụ anya ma zere nsogbu tupu ha ebilite, ma na-eme ngwa ngwa site na ntụkwasị obi zuru oke, nke na-atụgharị na nchekwa ego, nnweta ọrụ ka mma, mmetụta na-erughi gburugburu ebe obibi na nchekwa.
Bentley Systems bụ onye na - eweta ụwa niile nke ihe ngwọta ngwanrọ maka ndị injin, ihe owuwu ụlọ, ndị ọkachamara nke geospatial, ndị na-ewu ụlọ na ndị nwere ikike maka imewe, iwu ihe owuwu na akụrụngwa, gụnyere ọrụ ọha, ọrụ ọha, osisi na ụlọ ọrụ mmepụta ihe na dijitalụ obodo. Ngwa mmeghe mepere emepe dabere na Bentley MicroStation na ngwa simulation mepere emepe ya atumatu nhazi; Ihe omume ProjectWise gi na SYNCHRO na eme ka nnyefe oru; na ya AssetWise awade mee ngwangwa nke bara uru na ịrụ ọrụ netwọkụ. Na-ekpuchi injinịa akụrụngwa, ọrụ Bentley nke Mattwin na-enwe ọganihu dị mkpa BIM na GIS site na ejima dijitalụ 4D.
Bentley Systems na-arụ ọrụ karịa ndị ọrụ ibe 3.500, na-ewepụta ego ha na-enweta kwa afọ nke $ 700 nde na mba 170 ma tinye ego karịrị ijeri $ 1 na nyocha, mmepe na ịzụta ihe site na 2014. Kemgbe mmalite ya na 1984, ụlọ ọrụ ahụ bụ akụrụngwa nke ọtụtụ ndị guzobere ise ya, bụ ụmụnna Bentley. www.bentley.com
Previous Post«Previous «EthicalGEO» - mkpa iji nyochaa ihe ize ndụ nke ọnọdụ geospatial
Next Post Afọ ọzọ, akara ngosi ọzọ, ahụmahụ ọzọ pụrụ iche… Nke ahụ bụ YII2019 maka m!Next »